1xbet မှတ်ပုံတင်ရေး Cote ဃ & rsquo; ဆင်စွယ် – 1xbet အတွက်ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ?
Publié par admin ရဲ့ le mai 10, 2016 mai 10, 2016
အွန်လိုင်းစျေးကွက်နှင့်စပ်လျဉ်း 2011, 1xBet လျှင်မြန်စွာကြီးထွားဖို့စတင်: က c & rsquo; rsquo & ဖြစ်၏ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နှင့် Cote ဃ & rsquo; Ivoire, ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးကိန်းကိုကျေးဇူးတင်, တာဝန်, ရရှိနိုင်မှုဃ & rsquo; တစ်ဦး functional ဖြစ်စေဆယ်လူလာလွှတ်ပေးရန်. 1xbet နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် & rsquo; ပိုက်ဆံ Moov (Flooz), ဌ & rsquo; MTN မိုဘိုင်းပိုက်ဆံ (Momo), ဌ & rsquo; လိမ္မော်ရောင် Silver,, debit နှင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များ. ကစားသမားများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအများအပြားဆုကြေးငွေကဲ့သို့ 1xbet paris ရုံး, ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေဆုကြေးငွေအပါအဝင် 66 000 inr.
ဒါကကစားပွဲမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖောက်သည်ကမ်းလှမ်း. ကို C & rsquo; 1xbet ကမ္ဘာတဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်. 1xbet ရရှိနိုင်ပါသည် 42
ဘာသာစကားများနှင့်လက်ခံမျိုးစုံငွေကြေးနှင့်အမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ, Bitcoin အပါအဝင်!
သငျသညျ 1xbet ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်လိုပါက, သင်ပိုမိုအလောင်းအစားနိုင်ပါတယ် 1000 နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များ. သို့သော်ရှိသမျှသောမယ့်! 1အမြင့်ဆုံးရမှတ်တွေထဲက; xBet ကိုလည်း & rsquo ကမ်းလှမ်း. ကမ်းလှမ်းမှုရာပေါင်းများစွာ၏ & rsquo; အားကစားဖြစ်ရပ်များ, လောင်းကစားရုံဂိမ်း, ထီ, စသည်တို့ကို …! 1xbet ဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်ပုံကိုသိခငျြ? J & rsquo; ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်အရာအားလုံးရှင်းပြ!
1အပြည့်အဝဃ & rsquo xBet; အမျိုးမျိုးသော options များနှင့်၎င်း၏ကြီးထွားလာဂုဏ်သတင်းကိုအလွန်အောင်မြင်မှု. L ကို & rsquo; ဒီကစားပွဲအပေါ်ရေးသားခြင်းလွယ်ကူသည်.
အရပျကိုပဲရစ်, လဲလှယ်ဆုကြေးငွေနှင့် & rsquo ကနေဆုတ်ခွာ; ပိုက်ဆံ, သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ဖန်တီးရမယ်. မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် 1xbet အလောင်းအစားကိုစတင်ရန်, ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက်ဘွတ် site နှင့်ဝစွာသွားရောက်ကြည့်ရှု: တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, ပထမအမည်ကို, နာမတျောကို, နာမကိုအမှီ & rsquo; အသုံးပြုသူနဲ့ password. အဆိုပါပြီးစီးခဲ့ပုံစံနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, vous devez cliquer sur “enregistrer”. 1XBET တနေ့ခြင်းတွင်သင့် application အတည်ပြု. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကစားခြင်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်.
အို & rsquo; 1XBET အများအပြားအားသာချက်များအပေါ်မှတ်ပုံတင်ရန်. ဒါကကစားပွဲတစ်ခုဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်း 200% ကူပွန်ကုဒ် 1x_825 သုံးပြီး. ဒီဆုကြေးငွေကိုအသုံးပြုရန်, က c & rsquo; အလွန်ရိုးရှင်းပြီး! မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, သငျသညျအနညျးဆုံးသင့်အကောင့်သို့ငွေသွင်းဖို့လိုအပ် 1 ယူရို. 1xbet သင်တစ်ဦးဆုကြေးငွေကိုပေးမည် 200% သငျသညျငွေပမာဏကို.
rsquo & အားလုံးသည်နည်းလမ်းများ; 1xbet မှတ်တမ်းတင်
1) 1xbet အပေါ်အလောင်းအစားကိုစတင်ရန်, သငျသညျဃ & rsquo ရန်ရှိသည်; ဘွတ်၏တရားဝင် website တွင်ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်. လုပ်ဖို့, ဒီ link ကို 1xBet.com အပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
ငါမီတာ & rsquo; ယခုမှတ်ပုံတင်ရန်
1xbet ခြေလှမ်း Add 2
ဒီကစားပွဲထဲမှာ, & rsquo အတော်ကြာနည်းလမ်းများရှိပါသည်; ဤနေရာတွင်စစ်ဆေး, အဓိကနေသော:
Après avoir cliqué sur le bouton “Inscription”, သင်ဃ & rsquo access လုပ်နိုင်; မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ဝတ်စုံသင်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်. တဦးတည်းကလစ်၌သငျမှတျပုံတငျတဲ့အခါမှာ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကို select (ဤတွင်ကင်မရွန်းအတွက်) နှင့်သင့်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးစနစ် (ဤနေရာတွင် XAF, ထို့အပြင် CFA ကိုခေါ်).
Ensuite, ကူပွန်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ (1x_825) သငျတို့သဎ & rsquo သက်သေပြရန်အတွက် captcha အတည်ပြု; ပြန်လည်မစက်ရုပ်. နောက်ဆုံး, cliquez sur le bouton “Enregistrer” pour terminer votre inscription. သငျသညျယခုရရှိသောအကောင့်နံပါတ်နှင့်စကားဝှက်ကိုသုံးပြီးဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
1xbet ခြေလှမ်း 2
သင်သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်အခြေခံပြီးစာရင်းသွင်းရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, ကို select & rsquo; သင့်လျော်သော tab ကို. Ensuite, သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင့်နိုင်ငံ၏ငွေကြေးစနစ်ကို select. Ensuite, ကူပွန်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ (1x_825) နှင့် validation ကို captcha.
Cliquez sur le bouton “မှတ်ပုံတင်ပါ” pour compléter votre inscription. နောကျ, သင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီ & rsquo င်တစ်ဦးကို SMS ကိုလက်ခံရရှိ; အသုံးပြုသူနဲ့ password, သင်သည်သင်၏လောင်းဖို့ site ကိုချိတ်ဆက်ရန်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်.
1xbet ခြေလှမ်း 3
3) 1xbet မှအီးမေးလ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း.
အီးမေးလ်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန်, vous devez sélectionner l’onglet “Courrier électronique”. & rsquo ၏ဤအမျိုးအစား; မှတ်ပုံတင်ရေးအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုလိုအပ်တယ်: နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်, ပထမအမည်ကို, အမည်နှင့်စကားဝှက်ကို, သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သင့်ငွေကြေးကို.
လုပ်နိုင်သော, သင်သည်လည်းသင်၏အဧရိယာကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, သင့်ရဲ့မြို့နှင့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို. N ကို & rsquo; သည့်ပရိုမိုကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့မေ့လျော့တော်မ (1x_825) အဆိုပါ captcha အတည်ပြုရန်မတိုင်မီ. Après avoir cliqué sur le bouton “မှတ်ပုံတင်ပါ”, အသုံးပြုသူနှင့် password; သင်သည်သင်၏နာမကိုအမှီ & rsquo အတူအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
4) လူမှုရေးကွန်ရက်အကောင့်မှတဆင့် Subscribe
သင်သည်သင်၏လူမှုကွန်ယက်အကောင့်မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုပါက, vous devez choisir l’onglet “Réseau social”, ထို့နောက်သင့်အကြိုက်ဆုံးလူမှုကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်. အချို့ကလူမှုရေးကွန်ရက်များရရှိနိုင်ပါသည်: Facebook က, Google+ က, စသည်တို့ကို.
သင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုကွန်ယက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်ပြီးနောက်, သင်တစ်ဦးရဲ့ login form ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်. သင်တို့၏နာမ & rsquo Enter; ရွေးချယ်ထားသောကွန်ယက်အသုံးပြုသူနဲ့ password, après avoir cliqué sur le bouton “Entrée” pour terminer votre inscription. N ကို & rsquo; သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်၏ငွေကြေးကိုရွေးချယ်ဖို့မေ့လျော့တော်မ.
1xbet Moby အပေါ်တစ်ဦးစမတ်ဖုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်. ညာဘက်ထောင့်တွင်အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဆိုက် s ကို & rsquo ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်း; ပွင့်လင်းအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဘို့ကိုသာ options နှစ်ခုရဲ့တစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူ.
ဘယ်လို s ကို & rsquo; 1xbet ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူ
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း & rsquo; မှတ်ပုံတင်ရေးဆဲလ်ဖုန်းနှင့်အတူအီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းအရေအတွက်အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းမှတူညီဖြစ်ပါသည်. လျှောက်လွှာ; တူညီသည့် & rsquo များအတွက်ဝင်, အရာကိုသင်အားကစားအပေါ်လောင်းခွင့်ပြု 1xbet.
ခရီးသည်များအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, 1xbet ဘီစီ, site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသစ်ကကစားသမားဆုကြေးငွေခံယူခြင်းနှင့်အမြန်သို့မဟုတ်သာမန် mode ကိုအနားမှာရှောက်သွားစေခြင်းငှါသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု. အဆိုပါဆုကြေးငွေဃ & rsquo; မှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်နိုင်တဲ့လက်လှမ်းမမီ 66 000 inr.
1xbet iOS နှင့် Android များအတွက်မိုဘိုင်း app ရှိပါတယ်. ဤလျှောက်လွှာကိုအမြန်နှင့်လက်တွေ့ paris ဖွ, အင်တာနက်လမ်းကြောင်းလျှော့ချခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်နေစဉ်. Ouvrez la section “Application mobile” au bas de la page. သင်တစ်ဦး iPhone နှင့် Android ရှိပါကသင့်မိုဘိုင်းအထောက်အကူဖိုင် format နဲ့ .apk လျှင် Select လုပ်ပါက iOS ကို select (1xbet.apk).